I-China iholele umvelisi wezibane zesikhukula 200W IP 65 led isibane sebala lokukhukula 90W 100W 120W 120W 150W 180W 240W 300W abavelisi kunye nabanikezeli | Kasem
umvelisi wesikhukula esikhokelela kwisikhukula 200W IP 65 led isibane sebala leesikhukula 90W 100W 120W 150W 180W 240W 300W
Amandla e-LED: I-LED60W-300W
Igalelo lombane: AC100-240V
Uluhlu lokuphindaphinda: 50-60HZ
Isibakala saMandla: >0.97
Ubushushu boMbala: 2700-6500K
Amandla e-LED I-LED60W-300W
Igalelo lombane AC100-240V
Uluhlu lokuphindaphinda 50-60HZ
Amandla Factor >0.97
Ubushushu boMbala 2700-6500K
Isalathiso sokuBonelela ngombala 70/75/80
Isibane ngokuSebenzayo 110lm/w
Ubushushu bomsebenzi -45°C-50°C
Ukufuma komsebenzi 10%'90%
IBanga loKhuseleko IP68
Okuqaqamba Kakhulu:Ukulungiswa kokukhanya kwebala le-LED kunika i-42000 Lumens kwi-5000K Daylight White. Izibane zebala le-LED zifana neengelosi ezikhanyisa phezu kwakho
Gcina imali:Nciphisa ibhili yakho ye-elektroniki ukuya kuthi ga kwi-84%, 900W HPS / HID endaweni nge-80W ukukhanya kwe-LED. Ukulindela ubomi beeyure ze-50,000-izihlandlo ezithathu ubude be-MH-okunciphisa ukulungiswa kweendleko kunye nesidingo sokutshintshwa.
IP65 WATERPROOF: Izibane ze-LEDMO ze-LED zangaphandle ziyi-IP65 zingangeni manzi, azikwazi ukungena kwaye zingenamanzi; Ifanele zombini ngaphakathi nangaphandle.njengeendlela zokuhamba, iiyadi, iipati, iindawo zokupaka, amabala emidlalo, iindlela zokuhamba, iigadi, iidokhi kunye nezinye iindawo.
Ukuhlohla okuguquguqukayo: Izibane zokhuseleko zangaphandle ziza kunye ne-bracket yentsimbi ehlengahlengiswayo, inokufakwa kwisilingi, iindonga, umhlaba kunye nezinye iindawo, ngokulungelelanisa ii-angles ezahlukeneyo.
IWARANTI YEMINYAKA emi-3:Sikufihlile. Qhagamshelana nathi ukuze ufumane enye indawo ukuba kukho umba I-Non-plug. Kufuneka intambo ngqo.
IiChips ezikumgangatho ophezulu
Izibane zezemidlalo ezikhokelwayo zisebenzisa iitshiphusi ezikumgangatho ophezulu ukwenza izibane zisebenze ngokuzinzileyo kwaye zibenobomi obude.
Iqokobhe leAluminiyam, Ukutshatyalaliswa kobushushu obungcono
Umgangatho ophezulu womsebenzi onzima wokufa uphose izindlu ze-aluminium, yenza i-LED Stadium izibane zibonelele ngokugqwesileyo.
IP65 Ukungangeni manzi
IP65 ibakala eliphezulu elingangeni manzi, elakhiwe ngeeplagi ezingangeni manzi, kunye nezindlu ezingangeni manzi, akukho mfuneko yakuzikhathaza ngemvula okanye imozulu yekhephu.
Isibiyeli esishukumayo sinokuba yi-270 degree rotatable, ilungiswe kuyo nayiphi na i-engile
Ukulawulwa kobushushu obukrelekrele umqhubi onegama elisetyenziswa kunye newaranti yeminyaka emi-5, indlu ye-aluminium drive ene-IP67 engangeni manzi, kwaye inokuqhuba ngokukhawuleza ubushushu ukusuka kumqhubi ukuba uphume.
Ngaphambili: I-200W isibane seZikhukula se-LED esineLens yokubona i-200 ye-Watt yeProjekthi yeBala leBala loKhukula kwisibane sokuKhanya kweMidlalo
Okulandelayo: ENTSHA 100pcsLED 1200mAh Ukulawulwa kokuKhanya koMzimba kweSensor yoMzimba ukuya kuthi xhaxhe ngorhatya olungangenwa ngamanzi i-IP65 yangaphandle Udonga oluxhonywe kwiSolar LED Wall Lamp yesiSitrato.
I-AC170-265V ekumgangatho ophezulu wombane omncinci wokukhanya kwesikhukula...
I-200W yesibane seZikhukula ze-LED ezine-Optical Lens 200 Watt ...
IP66 Waterproof yangaphandle Slim Motion Sensor LED ...
IP65 Ugqabhuko Ubungqina beLuminaire Landscape Lighti...
Ulawulo olungenacingo lweRGB Ukutshintsha Umbala weSikhukhula ...